DOOD: N'Golo Kante Vs Maurizio Sarri- Gary Lineker & Tony Cascarino Oo U Hiiliyay Xidiga Muslimka Ah Ee Kante Iyo Telegraph Oo Xaqiiqda Sheekadan Soo Bandhigtay. - Gool24.Net
DOOD: N’Golo Kante Vs Maurizio Sarri- Gary Lineker & Tony Cascarino Oo U Hiiliyay Xidiga Muslimka Ah Ee Kante Iyo Telegraph Oo Xaqiiqda Sheekadan Soo Bandhigtay.
November 30, 2018 Mahamoud Batalaale
Magaca N’Golo Kante waxa uu aduunka oo dhan ka yahay mid ixtiraam iyo sharaf ku mutaystay wixii uu soo qabtay dhawr sanadood ee ugu danbeeyay oo uu ku soo guulaystay laba koob oo Premier league ah iyo waliba koobka aduunka, waxaana qof kasta lama filaan ku noqday hadalkii uu Maurizio Sarri ku eedeeyay xidiga reer France.
Khilaafka uu Maurizio Sarri ka abuurtay xidiga kooxdiisa ugu saamaynta badan ee N’Golo Kante ayaa keentay in dood badan uu ka dhex abuuray kubbada cagta England waxaana jira khabiiro kubbada cagta ah iyo waliba wargayso la saftay Kante isla markaana si wayn uga hadlay.
Wargayska Telegraph ee dalka England ka soo baxa ayaa soo bandhigay sida uu Maurizio Sarri u badalay xaaladii N’Golo Kante ee tan iyo markii uu Leicester ka soo caawiyay koobka Premier League iyada oo xogta iyo istatiska xidigan laga ururiyay ay wax walba tilmaamayso.
Arbacadii Maurizio Sarri oo eedayn u soo jeedinayay Kante ayaa yidhi: “Waxaan filayaa sida aad ogtihiin in aan doonayo in aan khadka dhexe ka ciyaarsiiyo ciyaartoyda aad farsamada u leh oo ah Jorginho ama Fabregas. Anigu ma doonayo in aan Kante boos kaas ka ciyaar siiyo.Kanta kulankii ugu danbeeyay waxa uu doonay in uu kulanka xaliyo kadib 15 kii daqiiqo ee ugu horeyay laakiin waxay ahayd qaab qaldan”.
Haddaba inta aanan xogta sawirka lagu muujiyay ee Telegraph idiin soo gudbin aan marka hore eegno qaabkii Khabiirada kubbada cagta Gary Lineker iyo Tony Cascarino ay uga falceliyeen iyaga oo Kante taageere u muujiyay.
Khabiirka BT Sport & BBC Sport ee Gary Lineker oo hore Kante ugu soo taageerayay kooxdii ay ka soo wada ciyaareen ee Leicester City ayaa soo qoray: “Waxaa laga yabaa in isagu uu saxiixay qandaraas cusub, laakiin la siiyay micno la’aantan, waxay la qiimo noqon kartaa dalab wayn oo ka yimaada koox kasta oo doonaysa in ay wax ku guulaystaan”.
Wuxuuna Gary Lineker qoraalkan soo raaciyay wargays la daabacay oo uu ku qoran yahay hadalkii Sarri uu ku sheegay in Kante aanu xirfad ahaan u fiicnayn sida Jorginho iyo Fabregas isaga oo Gary Lineker tilmaamay in haddiiba uu Sarri sidan u fikirayo in kooxaha doonaya in ay koobab ku guulaystaan ay dalab ka soo gudbin doonaan Kante.
Dhinaca kale xidigii hore ee kooxda Chelsea ee Tony Cascarino isaga oo arintan ka hadlaya yidhi: ““Ma filayo in faaladii uu Sarri ka bixiyey Kante ay aad ugu salaysnayd farsamada, walaacna ay keenayso. Mawduuca ugu weyn waa in Kante la siiyey qandaraas cusub, sababtuna waa inay jireen kooxo badan oo raadinayey, laakiin waxa ku dhacday boos la’aan, waxaanad dareemaysaa in la dayacay.”
Tony Cascarino oo sidii Gary Lineker shaki galinayay mustaqbalka Kante ayaa yidhi“Heshiiska cusub ee uu saxeexay, kuma filna inuu ka ilaaliyo Kante inuu sii joogo haddii xili ciyaareedka oo dhan uu waayo booskiisa.”
Haddaba Intii Uu Sarri Joogay Chelsea Maxaa Iska Badalay Kante?
N’Golo Kante ayaa gabi ahaanba isbadalay muddadii uu Sarri la shaqaynayay marka la qiimeeyo xogta kulan kasta loo diwaan galiyay oo la barbar dhigay xogta mudadii uu Premier league ka ciyaarayay oo dhan laakiin waxa uu lumiyay xidigii uu ahaa sabbatoo ah boos la’aanta uu Sarri sababta u yahay.
N’Golo Kante waxa uu xili ciyaareedkan 13 kii kulan ee la soo ciyaaray uu kubbada ku taabtay xerada ganaaxa kooxaha kale 22 jeer laakiin waxaa layaableh in xili ciyaareedkii uu Leicester City ka soo caawiyay koobka Premier league aanu hal mar oo kaliya kubbada ku taaban xerada ganaaxa dhamaan kooxihii uu xili ciyaareedkan oo dhan kaga hor yimid Premier League.
Waxa uu qodobkan muhiimka ahi muujinayaa in shaqada N’Golo Kante ugu fiican yahay ayna ahayn in uu ka ciyaaro dhexda hore balse shaqada ugu fiican uu ku qaban karo booska uu aduunka ugu fiican yahay ee burburiyaha ama dhexda danbe waana sababta aanu 38 kulan hal mar kubbada ugu taaban xerada ganaaxa kooxaha kale markii uu Leicester City ka soo caawiyay koobka Premier league.
Haddii aan soo qaadano sawirka uu wargayska Telegraph ku muujiyay in Sarri uu dilay tayadii N’Golo Kante ayaa muujinaya xili ciyaareedkan uu Kante sameeyay 1.85 taakal oo kaliya kulankiiba , waxa kale oo uu kulankiiba sameyay 1.31 dhexda ka qabasho kubbadood halka uu 1.08 kaliya oo gambis ah sameeyay kulankiiba waana xog dhamaan aad uga hoosaysa wax qabadkiisii min xili ciyaareedkii 2015/16 ilaa 2017/18 kii.
Laakiin taas badalkeeda waxaa sare u kacay tirada kubbad taabashada Kante ee xerada ganaaxa kooxaha kale oo ah 1.68 taabasho kulankiiba taas oo muujinaysa in Kante loo wareejiyay in uu waqti badan ku qaato dhexda hore ee aanu awooda badan u lahayn sida burburiyaha.
Waxa kale oo xogtan ka muuqata in Kante uu kulankiiba soo abuurayay 1.23 fursadood halka kulannkiiba uu 1 darbo goolka ku tuurayay waxayna dhamaan muujinayaan in aanu joogin booskii uu ugu fiicnaa ee dhexda danbe taas oo uu kubbada ka soo dhisayay isla markaana uu ku asturayay difaaca kooxdiisa Chelsea.
Halkan kaga bogo jaantuska xogta N’Golo Kante ee Wargayska Telegraph Oo Ah Wax Qabadkiisa Kulan Kasta Oo Premier league Ah.
Si kastaba ha ahaatee, Maurizio Sarri ayaa eedayn badan kula kulmaya dhaliishii iyo eedayntii uu Kante u soo jeediyay waxaana laga doonayaa in uu booskiisii difaaca hortiisa ee burburiyaha uu ku soo celiyo iyada oo xataa mustaqbalkii Kante mugdi la galinayo maalmo kooban kadib markii uu heshiis cusub saxiixay.
Haddaba akhriste, adigu sideed u aragtaa xogta Kante ee isbadalka uu ku sameeyay Sarri? Miyaad filaysaa in Sarri uu sabab u noqon doono in Kante uu ka baxo Blues?
Haaa waa macquul in kante uu baxo Mida kle kante waa ciyaaryhn xaawara badan kubad kastne min dhinic ilaa dhac wuu difaaca lamana helo ciyaaryhn nuucaas cml ah sarri wxuu ka doorbidoowa jorginho mrka kante in uu baxo ayee u badan thy 100%80 lacg kasta ee qabdaraaskiisa u ku bur burayana koox ayaa LA diyaari saan filaayo sarri ciyaaryhn fcn ayuu Chelsea ka Erin rbaa
M SARI MA AHA SIDAAN FILAYAY MARBA HADDUU XAAL SIDAA YAHAY
WAA UUN TOTENHAM- TA ITALY MACALLINKEEDI
KANTE. WAA BURBURIYE DHAMMAYSTIRAN 100% MANCITY AYAANA U BAAHAN ISKA DHAAF